पुरुषका कस्ता बानी प्रति आकर्षित हुन्छन् महिला - Everest Dainik - News from Nepal
पुरुषका कस्ता बानी प्रति आकर्षित हुन्छन् महिला
महिलाहरू अरुलाई चाँडै विश्वास गर्ने खालका हुन्छन् । औसत हेर्ने हो भने पुरुषका तुलनामा महिलाहरू अरु प्रति चाँडो आकर्षित हुने र प्रेममा पर्ने गर्दछन् ।
खासमा महिलाहरू पुरुषका केही बानीहरूका कारण चाँडो आकर्षित हुने गरेका छन् । आखिर पुरुषहरूका के कस्ता बानी हुन् त जसले महिलाहरू आकर्षित हुने गर्दछन् । प्रस्तुत छन् केही त्यस्ता बानीहरू:
याे पनि पढ्नुस महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्छ : उपराष्ट्रपति
१. कुरा गर्ने शैली
महिलाहरू पुरुषको कुरा गरनै तरिकाप्रति पनि ध्यान दिने गर्दछन् । विशेष गरी प्रेम र सम्मानका साथ कुरा गर्ने पुरुष प्रति महिलाहरू स्वाभाविक रूपले नाइ आकर्षित हुने गर्छन् ।
२. कुरा सुनिदिने र बुझिदिने
महिलाहरू चाहन्छन् कि उनको पुरुष साथीले उनको कुरा सुनिदेओस् र बुझिदेओस् । त्यसैले आफ्ना कुरा सुनिदिने र बुझिदिने पुरुष प्रति महिलाहरू छिट्टै आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कहाँ गए कञ्चनपुरका ७८ महिला ?
३. प्रोत्साहित गरिरहने
महिलाहरू आफुलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहने पुरुषलाई मन पराउँछन् । उनीहरू यस्ता पुरुषलाई प्रेम मात्रै हैन सम्मान पनि गर्दछन् ।
४. आकर्षक व्यक्तित्व
महिलाहरू बढी जसो पुरुषको सुंदरतामा नभइ व्यक्तित्वमा ध्यान दिने गर्छन् ।उनीहरू घमंडी र अभिमानी पुरुषको नजिक आउन मन पराउँदैनन् । विनम्र स्वभावके पुरुष महिलाहरूको मन जित्न सफल हुन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस सार्वजनिक काममा महिला सहिभागिता बढ्दो
ट्याग्स: Attract, Men, women